Kwete yekuisa wega: Abu Dhabi anovhura kune yakazara vaccinic vafambi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UAE Kuputsa Nhau » Kwete yekuisa wega: Abu Dhabi anovhura kune yakazara vaccinic vafambi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Iri idanho rakakura kuenda kumberi sezvo UAE ichigadzirira kuitisa iyo EXPO 2020, iyo Fomula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix uye zvimwe zvakawanda zviitiko zvepasirese mumwedzi iri kuuya.
Abu Dhabi inobvisa zvido zvekuiswa kwega kune vashanyi vakazara.
Abu Dhabi anotarisira kuwedzera kukuru mukuda kwekufamba kuenda kune emirate.
Etihad Airways yakagadzirirwa kusimudzira mukufamba kuenda ku Abu Dhabi.
Hurumende yeAud Dhabi yakazivisa kubviswa kwechinodikanwa chega chevafi kune vese vafambi vanosvika kune emirate kubva kunze kwenyika.
Etihad Airways, iyo ndege yenyika yeUAE, yakagadzirira kukurudzira mukufamba kuenda nekudzoka kubva kuAud Dhabi zvichitevera kuziviswa kwehurumende.
Vafambi vakazara (vaine majekiseni anotenderwa neWorld Health Organisation) vanogona kusvika kubva kunzvimbo dzese dzepasirese pasina chikonzero chekuisa wega. Vafambi vese vachada kuyedzwa kwePCR mukati maawa makumi mana nemasere ekubva, bvunzo pakusvika nekuedzazve pamazuva akasarudzwa zvichienderana nenyika yavakafamba kubva. Vafambi vasina kuvharirwa, zvisinei, vanofanirwa kutevedzera mitemo zvinoenderana nekwavari kuenda.
Tony Douglas, Boka Chief Executive Officer, Etihad, akataura kuti: “Nhau dzakanyatsoenderana nenguva yekutanga kugamuchira nyika kuti idzoke Abu Dhabi. Tinotarisira kuwedzera kukuru mukushanya kubva kuvashanyi uye kushanyira shamwari nehama kubva pasirese. Izvi zvichapawo vagari veUAE kukura kukuru uye rugare rwepfungwa kana uchifamba pasi rese.
"Emirate yaendesa chimwe chezvirongwa zvehutano zveveruzhinji zvepasi rose kuchengetedza huwandu hwevanhu hwakawanda hwekutapira nhomba, uye mhinduro dzakanangana netekinoroji seAl Hosn app kuchengetedza kuchengetedzwa kwevagari nevashanyi.
"Iri idanho rakakura kuenda kumberi apo UAE iri kugadzirira kuitisa EXPO 2020, iyo Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix uye zvimwe zviitiko zvepasirese mumwedzi iri kuuya.
“Parizvino Etihad iri kushanda kunzvimbo makumi mapfumbamwe nemashanu dzevapfuuri pamwe neimwe yezvikwata zvidiki pasi rose uye zvine mutsigo. "Tine tarisiro yekugamuchira vaenzi vedu kuAud Dhabi neEtihad kuti tinakidzwe nenzvimbo yepasi rose - guta guru uye guta guru ratiri kudana nemusha wedu."
Kubhururuka neEtihad kunotsigirwa nechirongwa cheEtihad Wellness icho chakaunzwa kubatsira kubatsira kudzikamisa kupararira kwe COVID-19. Etihad yaive ndege yekutanga pasi rose kuzadza zvakakwana vashandi vayo. Etihad inodawo 100% yevaifamba nayo kuti varatidze yakaipa PCR bvunzo vasati vakwira kuti vadzivirire inflight nharaunda, iyo yave kuzivikanwa seimwe yeakanakisa pasirese.
Ndege yateedzera hurongwa hwakakura hwehutsanana uye hutano uye iri kuita yakanyanya mwero hutsanana pane ese chikamu cherwendo rwevatengi. Izvi zvinosanganisira kudya, ndege uye kabhini-kuchenesa kwakadzika, kutarisa-mukati, kuongorora kwehutano, kukwira, inflight, kudyidzana kwevashandi, basa rekudya, kuburuka uye kutakura kwepasi, pakati pevamwe.